कुलामानाले राम्रो काम गर्न सकेनन ! जनता भ’र्ममा राखे : प्रधानमन्त्री ओली
कुलामानाले राम्रो काम गर्न स,केनन ! जनता भ’र्ममा राखे : प्रधानमन्त्री ओली
कुलमान ले राम्रो काम गर्न स,केनन ! जनता भ’र्ममा राखे : प्रधानमन्त्री ओली
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका का,र्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आम मानिसले चिन्ने नाम हो।
चार वर्षअघि प्राधिकरणको निर्देशक भएपछि उनले दैनिक १८ घण्टासम्म हुदै आएको लो,डसेडिङ शू,न्यमा झा,रे। त्यसपछि स,र्वसाधारणले उनलाई ‘उ,ज्यालो’को प!र्यायका रुपमा लिने गर्छन्।
तर उनको चार वर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते स,किँदैछ। उनलाई प्रा,धिकरणका पुनः नि,युक्त गरिनुपर्छ भन्ने आ,वाज स,र्वधारणका त,र्फबाट च,र्को रुपमा उ,ठ्न थालेको छ।
पछिल्ला दिनहरुमा सेलि,ब्रेटीहरुले नै यो,जनाबद्ध रुपमा उनको पुनः नि,युक्ति हुनुपर्छ भन्दै ल,बिङ गरिरहेका छन्।
सा!माजिक स,ञ्जाल घिसिङको समर्थनमा रं!गिएको छ। तर उनलाई नि!युक्ति गर्ने सरकार अझ वि,शेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन उ,नीप्रति स,कारात्मक छैनन्।
एउटा राम्रो कामको आ!वरणले अरु कम!जोरी ढा,कछोप गरेको भन्दै उनीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अ!सन्तुष्ट छन्।
प्राधिकरकणमा सिइ,ओ नि,युक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओली, ने,कपाका अर्का अ,ध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री पुनबीच सामान्य छलफल सुरु भए पनि नि,ष्कर्ष भने ननिस्केको बालुवाटार स्रो,तको दा!बी छ।
प्रचण्डले घिसिङलाई नै नि,रन्तरता दिन चाहे पनि ओली र मन्त्री पुन स,कारात्मक नभएकाले उनको स,म्भावना कम रहेको विश्व,स्त स्रोतको दा,बी छ। वि,द्युतमा लगानी गरेका नि,जी क्षेत्रसमेत घिसिङलाई निर,न्तरता दिन नहु,ने भन्दै ल!बिङ गरिरहेका छन्।
स्रो,तका अनुसार छलफलका क्र!ममा ओलीले घिसिङमाथि बुँ,दागत रुपमै अ,सन्तुष्टि जनाएका छन्। घिसिङले ओलीलाई भे,ट्न चा,हे पनि अहिलेसम्म समय दिएका छैनन्।
के-के हुन् घिसिङप्रति ओलीका अस,न्तुष्टि ?
– रा,ज्यको ल,गानीमा व्यक्तिगत जस: प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वा,मित्वको क,म्पनी भए पनि त्यस,बाट भए गरेका काम व्य,क्तिको मात्र जस,को विष,य हो,इन। घि,सिङले प्रा,धिकरणभन्दा पनि आफूलाई मा,थि रा,खेर सो!चे।
– लो,डसेडिङ अ!न्त्यमा नि,जी क्षेत्रको सहयोग छः प्रधानमन्त्री ओलीको बु,झाइमा प्रा,धिकरणको ए,कल प्र,यासले मात्र लो,डसेडिङ अ,न्त्य भएको होइ,न। नि,जी क्षेत्रको पनि सहयोग छ। अहिले झण्डै ६५० मे,गावट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका छन्।
– अझै भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको छ, बाहिर हल्ला गरे जस्तो नेपालकै विद्युत्ले लो,डसेडिङ अ,न्त्य भएको होइन। अझै पनि वर्षामा ३५० मेगावाटसम्म र हिउँदमा ६५० मेगावट बिजुली आ,यात भइरहेको छ।
– सं,स्थागत स्रोत सा,धनमा व्य,क्तिगत प्रचारः स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको ख,र्चमा आफ्नो व्य,क्तिगत प्र,चार बढी गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझा,इ छ। प्रा,योजित रुपमा आफ्नो प,क्षमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गएर सरकार र नेताहरुलाई ब,द्नाम ब,द्नाम गराएको भन्दै ओली अ,सन्तुष्ट छन्।
– नीति कार्यक्रममा स,मावेश भएको विषयलाई स,मेत सरकारलाई ज,स दिएनन्ः स,रकारले चा,लू आ,र्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मासिक १० यु,निटसम्म बिजुली ख,पत गर्ने प,रिवालाई नि,शुल्क विद्युत् दिने घो,षणा गरेर का,र्यान्वयनमा ल्याएको छ। सं,स्थागत हिसाबले सरकार र मातहतका निकायले जस लिनुपर्ने उक्त विषयलाई घिसिङले प्रा!धिकरणकै ए,कल नि,र्णयका रुपमा प्र,चार गरे।
– मा,तहत कर्मचारीमाथि नि,रङ्कुश व्य,वाहार र भनेको न,टेर्ने। घिसिङले प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि निर!ङकुश व्यवाहार गरेको र आफूले भनेको सा,मान्य कुरा पनि नमा!नेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पुन दु,वै रु,ष्ट छन्। सामान्य खा,लका स,रुवा बढु,वा र प,दस्थापनमा स,मेत आफूहरुको कुरा न,सुनेको उनीरुको गु,नासो छ।